NGABA INOVELI YECORONAVIRUS IHLALA IXESHA ELINGAKANANI KWIMIPHEZULU? CHAZA IINGCALI - I-COVID-19
Ngaba iNoveli yeCoronavirus ihlala ixesha elingakanani kwiMiphezulu? Nazi ke iingcali ezaziyo ukuza kuthi ga ngoku
Eyona / I-Covid-19
Imifanekiso yeStocktrekImifanekiso kaGetty
Iingcali zizama ukufumanisa ukuba ihlala ixesha elingakanani inoveli coronavirus (COVID-19). Izazinzulu uqikelelo phakathi kweeyure ezimbalwa kunye neentsuku ezininzi.
Uhlobo lomphezulu, kunye neqondo lobushushu, lwenza umahluko kumandla ahlala ehleli, izifundo ziphakamisa oko.
Oogqirha bagxininisa ukuba ukuhlamba izandla kakuhle kwaye kuhlala kuyeyona nto unokuyenza ukuzikhusela kwisifo.
Ingcebiso ngoku eyaziwayo yokuyeka ukubamba ubuso bakho kwaye Hlamba izandla zakho rhoqo unenjongo enye ephakamileyo: phula imo yokudlulisela phakathi kwinoveli isifo esikho elizweni jikelele sentsholongwane ye-Corona .
Iyelelene kwi intsholongwane yomkhuhlane , Le coronavirus esandula ukufumanisa, eyaziwa ngokuba yi-COVID-19, kucingelwa ukuba Ukusasazeka ngamaconsi okuphefumla xa umntu osulelekileyo ekhohlela okanye ethimla, ngokutsho kwamaZiko okuLawula nokuThintela izifo (CDC). Ukuba umalunga neenyawo ezintandathu, oko kusondele ngokwaneleyo ukufumana loo machaphaza ebusweni bakho, apho kunokwenzeka ngokulula ngenisa inkqubo yakho . Eso sesinye sezizathu zokuba ukuphambuka kwezentlalo ngoku kuyinto, kunye neenyawo ezintandathu ezinikwe njengeyona ndawo, ubuncinci bePerimeter phakathi kwakho nomnye umntu.
Kodwa lawo matontsi asulelekileyo anokuhlala nasemhlabeni, apho unokuwathatha ngezinye iindlela. Umzekelo, ngu ukuseta iselfowuni yakho phantsi kwikhawuntara yokuhlambela enamagciwane, okanye ukubeka izandla zakho kwitafile engcolileyo kwaye emva koko uchukumise amehlo, impumlo, okanye umlomo.
Ukuchukumisa iindawo ezingcolileyo okanye izinto azicingelwa ukuba yeyona ndlela iphambili [i-COVID-19] isasazeka, i-CDC ithi. Kodwa iingcali zithi kubalulekile ukuba uhlale uphaphile, njengoko kusenokubangela usulelo. Nantsi into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku malunga nokuba i-COVID-19 ingaphila ixesha elingakanani kwiindawo ezahlukeneyo, kunye nento onokuyenza ukuze uhlale ukhuselekile.
Ihlala ixesha elingakanani i-coronavirus yenoveli (i-COVID-19)?
Okwangoku, asibazi ubude bexesha i-COVID-19 droplet ihlala isebenza, ngokutsho UDebra Goff, uGqirha. , ilungu elasungula iNkqubo yoLawulo lweAntimicrobial Stewardship Programme eOhio State University Wexner Medical Centre kunye nommeli osandula ukuqeshwa kwiNkqubo yezeMpilo yoMbutho wezeMpilo kwilizwe jikelele kunye namazwe anengeniso ephakathi.
Nangona kunjalo, uyongeza, sinemikhombandlela elungileyo esekwe kwezinye iintlobo ezibanzi ze-coronavirus: isifo esiqatha sokuphefumla (SARS) kunye nesifo sokuphefumla eMiddle East (MERS). Ngokucacileyo, uhlobo ngalunye lukhethekile, kodwa uqhambuko lwangaphambili lusinika umbono ophucukileyo wokuba bahlala ixesha elingakanani kumphezulu, kuba ezi coronaviruses zihambelana nemfuza, utshilo.
Ngapha koko, a ukufunda isandula ukupapashwa kwi Ijenali yosulelo lweSibhedlele bajonge yonke idatha ekhoyo kwi-SARS kunye ne-MERS kunye namandla abo okuhlala kwiintlobo ezahlukeneyo zomhlaba. Abaphandi bafumanise ukuba ezo coronaviruses inokuhlala isosulela phakathi kweeyure ezimbini kunye neentsuku ezisithoba , ehambelana noko I-World Health Organization kwaye i-CDC uqikelelo lwe-COVID-19.
Kutheni ixesha elininzi kangaka? Ngenxa yokuba udidi lomhlaba lubalulekile, kunye nobushushu bomphezulu. Umzekelo, ngentsimbi kwi-86 degrees Fahrenheit, i-MERS inokuphila phakathi kweeyure ezisibhozo ukuya kwezingama-24. Kodwa yehla loo tempile iye kuma-68, kwaye ezo ntsholongwane ziya kunamathela kusuku olongezelelweyo. Ngakolunye uhlangothi, i-SARS, kufuneka ikonwabele ukuphila ubomi bayo ngokupheleleyo, kuba isifundo sifumanise ukuba inamandla amakhulu okuhlala kwaye ihlala isebenza kangangeentsuku ezine ukuya kwezintlanu ngesinyithi, ngomthi, ngeglasi, nangamaphepha.
Ukubulala iintsholongwane ngokuqinisekileyo kuye kwanceda, ababhali bophando baqaphela. Abaphandi bajonga iintlobo ezininzi zee-biocidal agents ezisetyenziselwa ukucoca-ezinje ngotywala kunye ne-hydrogen peroxide- kwaye bafumanisa ukuba uninzi lwazo lusebenze ukuba i-coronavirus ingasebenzi.
Uphando olutsha evela kumaZiko ezeMpilo kaZwelonke (NIH) ahambelana nezi ziphumo. Uphononongo, olungakhange lujongwe kwakhona ngoontanga, lufumanise ukuba i-coronavirus yenoveli inokuphila ukuya kuthi ga kwiiyure ezintathu emoyeni, ukuya kuthi ga kwiiyure ezine zethusi, ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-24 kwikhadibhodi, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezimbini ukuya kwezintathu kwiplastiki kunye nentsimbi engenasici.
Okukwintsusa: Qhubeka uhlamba izandla zakho.
Nangona singenalo lonke ulwazi okwangoku malunga nokuba i-COVID-19 ikude kangakanani kumphezulu womhlaba, siyazi ukuba ihlala isasebenza ubuncinci umzuzwana, inde ngokwaneleyo ukuba inokudluliselwa , utsho UAndres Romero, MD , ingcali yezifo ezosulelayo eProvidence Saint John's Health Centre eSanta Monica, Calif.
Kungenxa yokuba iintsholongwane zisasazeka ngokulula kungekuphela ukusuka ezandleni ukuya ebusweni, kodwa nakwezinye iindawo, kubandakanya ukutya, i Amanqaku eCDC . Ungadlulisela iintsholongwane kuyo yonke into ukusuka kwizandla zomntu ukuya kwinto zokudlala ukuya komnye umntu izandla-yiyo loo nto iingcali ngoku zicebisa ukuba ufumane iindlela zokubambana ngesandla njengokujiwuzisa nje.
Le ntsholongwane yinto ekujolise kuyo, kwaye ulwazi luyafumaneka mihla le, ngamanye amaxesha ngeyure nganye, utshilo uGqirha Romero. Kodwa inye into esiyaziyo ngokuqinisekileyo kukuba ukuhlanjwa kwezandla yeyona ndlela ilungileyo yokuzikhusela, hayi nje kwi-COVID-19, kodwa nakweyiphi na intsholongwane onokuyikhupha ngaphezulu. Ukuhlamba izandla kunokuwunciphisa umngcipheko ngesixa esikhulu, mhlawumbi ngaphezulu kunokuba abantu becinga.
Ukuba usepinkini kwaye awukwazi ukufikelela kwisinki, usebenzisa i I-sanitizer yesandla equlethe ubuncinci i-60% yotywala ingayibulala intsholongwane, iingcali zithi, kodwa akufuneki isebenze njengendawo yokuhlamba izandla.
Kwaye, ayonzakalisi ukucoca iindawo ezichukunyiswa rhoqo: Jonga uluhlu olupheleleyo lweArhente yoKhuseleko lwezeNdalo kuvunyiwe iimveliso zokucoca ii-antimicrobial apha .
Iimpawu ezi-5 ezothusayo Ulele kuMatrasi ombi
Ungakuphilisa njani ukwenzakala kwakho ngokukhawuleza okukhulu
Iindlela ezili-17 zokutya okuneMpilo uza kubona kuyo yonke indawo ngo-2020, ngokukaDietitians
Izizathu ezi-4 zokuBakho komzimba wakho eziba zimbi ngakumbi
Ithetha ntoni i-888
imiyalezo yeengelosi 333
ukuba ungasusa njani hemorrhoids
I-1111 ithetha ingelosi
kuthetha ntoni ukubona u-444